RW Cabdiweli: Higsiga Cusub waa in loo daadejiyo gobollada dalka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxaa shalay galab Muqdisho lagu soo gebagebeeyey shirka Higsiga Cusub (New Deal) oo muddo 3 maalmood ah ka scday Mqudisho.
Shirka oo u socday qaab aqoon is weydaarsi ah ayaa waxaa looha hadlayeym sidii is faham iyo aragti midaysan laga qaato barnaamijka Heshiiska Cusub.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa soo xiray aqoon-isweydaarsi saddexd maalmood ahaa oo magaalada Muqdisho loogu qabtay saamileyda barnaamijka Heshiiska Cusub ee heer gobol ilaa heer qaran.
Aqoon-isweydaarsigani ayaa waxaa ka soo qaybgalay 180 qof oo ka socday Maamul Goboleedyada, Maamulada Gobolada, xubno ka socday bulshadas rayidka ah iyo ka-qaybgalayaal ka socday Wasaaradaha iyo Xafiisyada Dawladda Federaalka Soomaaliya.